CDC yakapa rairo yekuchimbidza paPfizer kana Moderna Booster Shots yevaAmerica
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » CDC yakapa rairo yekuchimbidza paPfizer kana Moderna Booster Shots yevaAmerica
Sirinji ine madosi epiritsi yePfizer COVID-19, inoratidzwa padhuze nemakadhi ekudzivirira, Mugovera, Kurume 13, 2021, pazuva rekutanga rekushanda panzvimbo yekudzivirira vanhu vakawanda paLumen Field Events Center muSeattle, iyo inosangana nemunda uko iyo NFL nhabvu Seattle Seahawks uye MLS nhabvu Seattle Sounders vanotamba mitambo yavo. Nzvimbo iyi, inova ndiyo huru nzvimbo yekubaiwa majekiseni ekudzivirira zvirwere munyika, ichashanda chete mazuva mashoma pasvondo kudzamara vakuru nedhorobha vatungamiriri vawana madosi akawanda emushonga. (AP Mufananidzo / Ted S. Warren)
Kurudziro yepamutemo ndiani uye riini rekugamuchira COVID-19 booster shot yakasunungurwa kuvaAmerica nhasi neCenters for Disease Control and Prevention (CDC)
Nyowani chaiyo CDC Kurudziro yeCovid booster shots muUnited States
Nhasi, CDC Director Rochelle P. Walensky, MD, MPH, vakatsigira CDC Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) kurudziro yekusimudzira pfuti yeECVID-19 majekiseni mune vamwe vanhu. Iyo Kudya neDrug Administration's (FDA) mvumo uye kurudziro yeCDC yekushandisa matanho akakosha kuenda kumberi apo isu tinoshanda kugara pamberi pehutachiona uye kuchengetedza maAmerican akachengeteka.
Kune vanhu vakagashira Pfizer-BioNTech kana Moderna COVID-19 jekiseni, anotevera mapoka anokodzera booster kupfurwa pamwedzi mitanhatu kana kupfuura mushure mekutanga kwavo kwateedzana:
Makore gumi nemaviri
Zera 18+ vanogara mukati marongero ekuchengetedza kwenguva refu
Zera 18+ vane mamiriro ekurapa
Zera 18+ vanoshanda kana vanogara mukati marongero ane njodzi huru
Kune vanhu vangangoita mamirioni gumi nemashanu vakawana jekiseni reJohnson & Johnson COVID-15, booster shots inokurudzirwawo kune avo vane makore gumi nemasere zvichikwira uye vakabaiwa majekiseni mwedzi miviri kana kudarika yapfuura.
Ikozvino kune zvinokurudzira mazano kune ese matatu anowanikwa macVV-19 majekiseni muUnited States. Vanhu vanokodzera vanogona kusarudza jekiseni ravanogamuchira seyokuwedzera dosi. Vamwe vanhu vanogona kuve nesarudzo yerudzi rwejekiseni iyo yavakagamuchira pakutanga uye vamwe, vangangoda kuwana imwe nyowani. Kurudziro dzeCDC izvozvi zvinobvumidza kune urwu rudzi rwekusanganisa uye kuenzanisa dosing ye booster shots.
Mamirioni avanhu achangobva kukodzera kupihwa booster kupfura uye vanozobatsirwa nekuwedzera dziviriro. Zvisinei, chiito chanhasi hachifanirwe kutsausa basa rakakomba rekuona kuti vanhu vasina kubayiwa jekiseni vanotora nhanho yekutanga vowana mushonga wekutanga weECOVID-19. Vanopfuura mamirioni makumi matanhatu nemashanu emamerica vanoramba vasina kubayiwa nhomba, vachisiya ivo - nevana vavo, mhuri, vadiwa, nenharaunda- vanotambura.
Inowanikwa data izvozvi inoratidza kuti ese matatu e COVID-19 majekiseni akatenderwa kana kupihwa mvumo muUnited States ramba uchidaro zvinobudirira mukuderedza njodzi yechirwere chakakomba, chipatara, uye kufa, kunyangwe zvichipararira zvakanyanya Delta musiyano. Kubaya nhomba inoramba iri nzira yakanak yekuzvidzivirira uye kuderedza kutapukira kwehutachiona uye kubatsira kudzivirira mitsva mitsva kubva pakubuda.
Izvi zvinotevera zvinotaurwa kuna Dr. Walensky:
“Aya mazano ndemumwe muenzaniso wekuzvipira kwedu kwakakosha kuchengetedza vanhu vazhinji sezvinobvira kubva kuCOVID-19. Humbowo hunoratidza kuti majekiseni matatu ese eECVID-19 anotenderwa muUnited States akachengeteka - sekuratidzwa kwayakaitwa neanopfuura mazana mana emamiriyoni emishonga yekudzivirira. Uye, zvese zvinoshanda zvakanyanya mukuderedza njodzi yechirwere chakakomba, chipatara, uye kufa, kunyangwe iri pakati pekupararira kwakapararira kweDelta